विश्वकप फुटबल हुने कतारका ८ अद्भुत रंगशाला (फोटोफिचर)￼
२०७८ चैत्र २८ , सोमबार ०६:०४ मा प्रकाशित
एसीयाली मुलुक कतार विश्वकप फुटबलको २२ औं संस्करणका लागि पूर्णत तयार अवस्थामा पुगेको छ । कठिन मानिएको विश्वकप फुटबलको आयोजना खाडीको सानो मुलुक कतारले कुशलतापूर्वक गर्ने चरणमा पुगेको हो । आगामी नोभेम्बर २१ देखी डिसेम्बर १८ सम्म हुने विश्वकप फुटबल कतारका बिभिन्न ८ रंगशालामा हुनेछन् ।
कतारले आफ्ना बिभिन्न पाँच शहरमा ती रंगशाला निर्माण गरी विश्वकपलाई स्वागत गर्न लागेको हो । जसमध्ये सबैभन्दा बढि रंगशाला अल रायन शहरमा बनाइएका छन् । त्यहाँ तीनवटा रंगशाला रहनेछन् । दोहामा २ तथा लुसाईल, अल वाकरा र अलखोरमा एक एक रंगशाला रहेका छन् ।
१. लुसेल आइकोनिक स्टेडियम – लुसेल शहरमा रहेको यो रंगशाला विश्वकप आयोजना हुने सबैभन्दा ठुलो रंगशाला हो । ८० हजार दर्शक क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा विश्वकपको फाइनलसहित अन्तिम चरणका १० खेल हुनेछन् । कतार फुटबल संघको स्वामित्वमा रहेको लुसेल स्टेडियमको निर्माण सन् २०१७ अप्रिल ११ बाट सुरु गरिएको थियो । ४ बर्षमा निर्माण सकिएको यो रंगशाला गत नोभेम्बर २१ बट संचालनमा आएको हो । राजधानी दोहाबाट २३ किलोमिटर उत्तरमा रहेको यो रंगशाला निक्कै आकर्षक बनाईएको छ ।
२. अल–बायत स्टेडियम– कतारको अलखोर शहरमा बनाईएको यो रंगशाला भत्काएर स्थानान्तरण गर्न मिल्ने गरी बनाईएको र.गशाला हो । यो रंगशालाको निर्मार्णमा अधिकांश नेपाली श्रमिक संलग्न थिए । ६० हजार दर्शक क्षमताको रंगशाला सन् २०१४ बाट निर्माण थालिएको थियो । गत नोभेम्बर ३० मा निर्माण सम्पन्न भएको यो रंगशाला दोहाबाट ३५ किलोमिटरको दुरीमा छ । परम्परागत शैलीमा निर्माण गरिएको यो रंगशालामा पत्रकारका लागि १ हजार सिट सुरक्षित राखिएको छ । रंगशालाभित्र ६ हजार कार, ३ सय ५० बस र एक हजार ट्याक्सी पार्किङ गर्न सकिनेछ ।
३.स्टेडियम ९७४– दोहाको सामुन्द्रिक तटनजिक बनाईएको यो रंगशाला ४० हजार दर्शक क्षमताको छ । यसलाई रसआबु रंगशालाको नामले समेत चिनिने गरिन्छ । यो घाँसे मैदानलाई कतारको अन्तराष्ट्रिय टेलिफोन कोड ९७४ का आधारमा फरक नाम राखिएको हो । २०१८ मा निर्माण थालिएको यो रंगशाला नोभेम्बर ३० बाट संचालनमा आएको हो । वाटरफ्रन्ट साइटमा निर्माण गरिएको रंगशाला मोड्युलर डिजाइनको छ । यसलाई चारतारे रंगशालाको मान्यता समेत दिईएको छ ।
४.अल–थुमामा स्टेडियम– दोहाभित्रै रहेको यो रंगशालापनि ४० हजार दर्शक क्षमताको रंगशाला हो । हमाद अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै रहेको यो रंगशाला अरबी परम्परागत शैलीको रंगशाला हो । गत २२ अक्टोबरबाट संचालनमा आएको यसको निर्माण सन् २०१७ बाट सुरु गरिएको थियो । मुस्लिम धर्मालम्वीले लगाउने टोपीको आकारमा बनाईएको यो रंगशाला कतारकै अल जाबेर कन्ट्रक्सन र टर्कीको टेकफेन कम्पनीले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् ।
५.एजुकेशन सिटी स्टेडियम– अलरायन शहरमा रहेको यो रंगशालामा ४५ हजार ३ सय ५० दर्शक रहन सक्छन् । कतार फाउण्डेशनको हाताभित्र रहेको यो रंगशालालाई विश्वकप फुटबलका लागि पुर्ननिर्माण गरिएको हो । पहिला २५ हजार दर्शक क्षमता रहेको रंगशालालाई बढाएर ४५ हजार पुर्याईएको हो । यो रंगशालालाई मरुभुमीको हिराको उपमा समेत दिइएको छ । यो रंगशालाको निर्माणमा २० प्रतिशत हरियो सामाग्री प्रयोग गरिएको छ । विश्वको सबैभन्दा पर्यावरणीय मानिएको यो रंगशालाले पाँच तारे रंगशालाको मान्यता पाएको छ । यसै रंगशाला निर्माणका क्रममा आप्रवासी कामदारमाथी कतार सरकारले श्रमशेषण गरेको एम्नेष्टि इन्टरनेशनलले आरोप लगाएको थियो ।
६.अहमद बिन अली स्टेडियम– अल–रायान स्टेडियमको नामले समेत चिनिने यो रंगशाला बहुउदेश्यीय रंगशाला हो । अलरायन स्पोर्टस क्लब र अलखरितियाथको गृह मैदानका रुपमा रहेको यो मैदान ४४ हजार ७ सय ४० दर्शक क्षमताको छ । सन् २००३ मा बनेको यो रंगशाला २०१५ मा भत्काएर नयाँ स्वरुपमा निर्माण गरिएको थियो । पुरानो रंगशालाका ९० प्रतिशत सामाग्रीलाई प्रयोग गरि नयाँ रंगशालाको निर्माण गरिएको हो । यो रंगशालामा झिल्ली सहितको विशाल मिडिया फेसेड राखिएको छ । जसमा खेलका अनुमानसहित समाचार, बिज्ञापन खेलकुदका विवरण सोझै स्किृनमा देखिनेछ ।
७. खलिफा स्टेडियम– अलरायन शहरमै रहेको खलिफा स्टेडिमकलाई कतारको पहिचान समेत मानिन्छ । ४० हजार दर्शक क्षमताको यो रंगशाला कतारको राष्ट्रिय रङ्गशाला पनि हो । रंगशाला हातामा स्पोर्ट्स सिटी कम्प्लेक्स, एस्पायर एकेडेमी, हमद नेवल केन्द्र र एस्पायर टावर रहेका छन् । १९७६ सालमा निर्माण गरिएको यो रंगशालालाई सन् २०१४ देखी १७ सम्म पुर्ननिर्माण गरिएको थियो । यसको नामाकरण कतारका पुर्बराजा खलिफा बिन हमाद अलथानीको नामबाट राखिएको हो । यो रंगशालाले चार तारे रंगशालाको मान्यता पाएको छ ।
८. अल जानोउव रंगशाला – अल वाकरा शहरमा रहेको यो रंगशाला निक्कै आकर्षक रंगशालाका रुपमा रहेको छ । ४० हजार दर्शक क्षमताको यो रंगशाला ५ बर्ष लगाएर निर्माण गरिएको हो । सन् २०१४ मा निर्माण सुरु गरिएको रंगशाला २०१९ बाट संचालनमा आएको हो । सामुन्द्रिक तटमा बसोबास गर्ने पुराना अरबी समुदायको जीवनशैलीको झक्लने गरी ढुङगाको शैलीमा यो रंगशाला निर्माण भएको हो । यो कतारमा प्रतियोगीताका दौरान १८ देखी २० डिग्रीको तापमान रहनेछ । कतारको तातो र सुख्खा हावापानीका कारण खेलमा असर नपरोस भन्ने उदेश्यले रंगशालामा कूलिङ सिस्टम राखिएको छ ।